Tag: hal abuur | Martech Zone
Tag: hal abuur
Sidee Koox Hal abuur leh u dhiseen Dhibco Fulineed si ay ugu muujiyaan Qiimahooda C-Suite
Jimco, Janaayo 22, 2021 Jimco, Janaayo 22, 2021 Molly Clark
Wax soo saar tayo sare leh ayaa muhiim u ah suuq geynta dijitaalka. Waa shidaalka otomaatiga suuqgeynta, xayeysiinta dhijitaalka ah, iyo warbaahinta bulshada. Hase yeeshe, in kasta oo doorka ballaadhan ee hal-abuurka ah uu ciyaarayo, helitaanka qolalka xiisaha leh ee shaqada galaya waa caqabad. Hoggaamiyeyaasha qaar waxay arkaan qoraalka kooban, inta badanna waxay arkaan natiijada, laakiin in yar ayaa og waxa ka dhex socda. Waxaa jira waxyaabo badan oo ka socda daaha gadaashiisa: mudnaanta mashaariicda, isu dheellitirka ilaha naqshadeynta,
COVID-19 wuxuu aasaas ahaan u beddelay adduunka suuqgeynta. Iyadoo lagu guda jiro xayiraadaha kala fogeynta bulshada, xeerarka xilliyeed ee dabeecadaha macaamiisha ayaa dib loo dhisay isla markiiba. Natiija ahaan, in ka badan saddex-meelood laba nooc ayaa soo sheegay hoos u dhaca dakhliga. Hase yeeshe, xitaa inta lagu guda jiro carqaladeynta heerka caadiga ah, celcelis ahaan Mareykanku wali wuxuu la kulmay ilaa 10,000 oo xayaysiis maalin kasta, halka noocyo badan ay ka soo baxeen wax soo saarkooda agagaarka caadiga ah ee cusub waxayna eegeen inay ilaaliyaan Share of Voice oo la mid ah
Arbacada, Nofeembar 28, 2018 Arbacada, Nofeembar 28, 2018 Douglas Karr
Mid ka mid ah mowduucyada sii socda ee aan ka maqlo horumarka xagga teknolojiyadda ayaa ah inay shaqooyinka halis gelinayso. In kasta oo ay run ka noqon karto warshadaha kale, haddana waxaan si dhab ah uga shakisanahay inay ku yeelanayso saamayntaas suuq-geynta gudaheeda. Suuqleyda ayaa hadda cakiran maadaama tirada dhexdhexaadiyeyaasha iyo kanaalada ay sii kordhayaan halka ilaha suuqgeyntu weli taagan yihiin. Teknolojiyaddu waxay fursad u siineysaa inay ku qalabaysato soo noqnoqoshada ama shaqooyinka gacanta, iyagoo siinaya suuqleyda waqti dheeraad ah
Khamiis, Janaayo 5, 2012 Khamiis, Janaayo 5, 2012 Douglas Karr
Sawir-gacmeedkan ka socda Marketo waa mid xariif ah oo aan la wadaagi karin. Khubarada cilminafsiga iyo aragtida shaqsiyadeed waxay muddo dheer aaminsanaayeen inay jiraan farqi u dhexeeya maskaxda midig iyo bidix. Dhinaca midig ee maskaxdaada ayaa mas'uul ka ah hal-abuurnimada, halka dhinaca bidix ay gacanta ku hayso faahfaahinta iyo hirgelinta. Dhinaca bidix waa falanqeyn halka dhinaca midigna farshaxan yahay. Suuqgeeye ahaan, nooca fikirka aad tahay ayaa kugu hagaya ololayaasha aad qorshaynayso.
Afar qalad Blogging ah oo ay ahayd inaan ka fogaado
Sabtida, Juun 5, 2008 Sabti, Noofembar 28, 2015 Douglas Karr
Galabtaan waxaan saacado kooban ku qaatay Barnes iyo Noble. Barnes iyo Noble aad ayey ugu dhowyihiin gurigeyga, laakiin waa inaan qiraa in Xuduudaha ay aad uga wanaagsan yihiin abaabulka iyo buugaagta oo si fudud loo helo Waxaan si joogto ah 'ugu soconayaa luuqyada' Barnes iyo Noble oo aan raadinayo halkii aan waqti ku qaadan lahaa akhriska. Sikastaba, waxaan sooqaatay joornaalkeyga aan jeclahay, Web Design Practical (aka .net) ugu dambeyntiina waxaan qaatay Buuga Darren iyo Chris, Sirta Blogging